Akụkọ - Sodium saccharin bụ ụdị siri ike nke ihe na-esi ísì ụtọ saccharin
Sodium saccharin bụ ụdị siri ike nke ihe na-esi ísì ụtọ nke saccharin. Saccharin anaghị edozi ahụ ma jiri ya gbakwunye ihe ọ beụ beụ na ihe ọgesụgesụ na nri na-enweghị calorie ma ọ bụ mmetụta na-emerụ ahụ nke ị sugarụ shuga. Iji ihe na-atọ ụtọ na-atọ ụtọ nwere ike inyere gị aka belata shuga ị na-a .ụ. Iri oke shuga bụ ihe a na-ahụkarị ma nwee ike itinye aka n'ọtụtụ nsogbu ahụike gụnyere ụdị ọrịa shuga nke 2, oke ibu na ọrịa obi.
Saccharin sodium mesh number: granulu anyị mepụtara bụ: 5-8 mesh saccharin sodium, 8-12 mesh saccharin sodium, 8-16 mesh saccharin sodium, 10-20 mesh saccharin sodium, 20- 40 mesh saccharin sodium, 40-80 mesh saccharin sodium na nkọwa ndị ọzọ.
Mgbe anyị na-eji saccharin sodium, anyị nwere ike họrọ dị iche iche saccharin sodium meshes dị ka mkpa dị iche iche.
Ihe ejiri mara sodium saccharin bu ndia: Ndi ana akpo sodium saccharin. Ọ bụ ụdị saccharin nwere nnu sodium nwere mmiri kristal abụọ. Ngwaahịa bụ crystalline na-enweghị ntụ ma ọ bụ ubé ọcha crystalline ntụ ntụ. O nwere mmiri kristal abụọ, ọ dịkwa mfe ịhapụ mmiri kristal iji mepụta sodium saccharin anhydrous. Mgbe ị nwụsịrị mmiri, sodium saccharin na-acha ọcha ntụ ntụ nwere uto siri ike ma na-atọ ụtọ, obi ilu, ísì ụtọ na obere isi. Saccharin sodium nwere adịghị ike okpomọkụ na-adịghị ike alkali eguzogide. Mgbe a na-ewepu sodium saccharin n'okpuru ọnọdụ acidic, ụtọ ahụ ga-eji nwayọọ nwayọọ pụọ.
A maara nke ọma sodium saccharin, na n'ihi njirimara ya, a na-ejikarị sodium saccharin eme ihe n'ọtụtụ ọrụ.
1. Nri na ihe ọveraụveraụ: ihe ọ drinksụ generalụ oyi, jelii, popsicles, pickles, preserves, pastries, mkpụrụ osisi echekwara, meringues, wdg.
2. Nri nri: nri ezi, ihe uto, wdg.
N'ime ha, ụlọ ọrụ na-ahọpụta electroplating na-eji nnukwu ego, ngụkọta mbupụ mbupụ na-egosi ọtụtụ ihe China rụpụtara.
Fọdụ nri anyị na-ejikarị nwere sodium saccharin.
Dochie saccharin, ma ọ bụ ihe ọzọ shuga na-edochi, maka shuga tebụl, ma ọ bụ sucrose, nwere ike inyere aka na nhalata ibu na njikwa ogologo oge, belata nsogbu nke oghere ezé ma bụrụ ihe dị mkpa na njikwa nke ụdị 1 na ọrịa shuga 2. A na-ejikarị saccharin eme ihe ọveraụ beụ na-aba n'anya karịa ka esi nri ma ọ bụ nri ndị ọzọ. Ọ dị ọtụtụ narị okpukpu karịa shuga na-adị na tebụl na enweghị calorie.